Global Voices teny Malagasy » Sorakaliana no Nahazoan’i Aoyagi Bisen Tao Japana Mpanjohy Tao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Oktobra 2017 5:01 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Tamin'ny tapaky ny volana septambra, namoaka lahatsary tao amin'ny kaontiny Twitter  i Aoyagi Bisen  izay nampiseho ny fomba fanoratana ilay heverina ho iray amin'ireo tarehin-tsoratra Shinoa manjavozavo sy sarotra indrindra: biang , izay nampiasaina manokana rehefa manoratra ny “paty biangbiang” amin'ny teny Mandaraina.
Nosoratana tamin'ny fampiasana ny Borosy Bisen  Bisen ôrizinaly sy ny taratasy hanshiyo  ny tarehintsoratra .
Amin'ny sioka miisa 52  monja vitany hatramin'izao, toy ny mbola zazavao ihany i Aoyagi, 27 taona, ao amin'ny Twitter, noho izany tena zava-malaza an-tserasera tokoa ny siokany “biang”. Teraka tao Osaka  i Aoyagi, nilaza izy tao amin'ny filazalazana momba ny tantaram-piainany ofisialy fa nanomboka nianatra ny fikaliana soratra Japoney avy tamin'ny renibeny nanomboka tamin'ny faha-efa-taonany .
Nomena fahazoan-dàlana ho mpampianatra sorakaliana izy fony 17 taona, ary nanohy ny fianarany ity zavakanto ity hatrany hatramin'izao fotoana. Ankehitriny, miasa ary efa mpikaly soratra matihanina i Aoyagi , manao fampirantiana  manerana izao tontolo izao, misolontena an'i Japana, sady mivarotra ny marikany manokana momba ny famokarana sorakaliana.
Araho i Aoyagi Bisen ao amin'ny Twitter  sy Instagram  raha hijery ny asakanto maromaro kokoa sy ny fampisehoana ny fanoratana kanji. Manasongadina ny antsipiriany sasany amin'ny fikaliany soratra ihany koa ny tranonkalany  , ary misy amin'izany no amidy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/11/108281/
 Pikantsary avy amin'ny Fantsona YouTube ofisialin'i Bisen Aoyagi : https://youtu.be/ieKicvuHXvE
 kaontiny Twitter: https://twitter.com/aoyagibisen/status/912320067865518080
 Aoyagi Bisen: http://aoyagibisen.jp/
 Borosy Bisen: https://aoyagibisen.thebase.in/items/4221688
 manao fampirantiana: https://www.youtube.com/watch?v=l8qWghSvgP8